Add-ons – Tagged "Label Printers Tape" – ICT.com.mm
Thermal Receipt Paper 80x40 mm (1Pcs)K2,300
MEGACOLOR Self-adhensive Label 50×30mm (3000 Pcs)K14,000
MEGACOLOR Self-adhensive Label 32×15 (5000 Sheets)K11,000
MEGACOLOR Self-adhensive Label 60×40 (800 Sheets)K10,000
Thermal 80 x 80 (BK) Paper RollK2,133
Thermal Receipt Paper 80x40 mm (1Pcs)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Siz: 80×40 mm x 1 Pcs
MEGACOLOR Self-adhensive Label 50×30mm (3000 Pcs)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ 50×30mm 3000 Pcs3Rows
MEGACOLOR Self-adhensive Label 32×15 (5000 Sheets)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ 32×15 5000 Sheets
MEGACOLOR Self-adhensive Label 60×40 (800 Sheets)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ 60×40 800 Sheets
Thermal 80 x 80 (BK) Paper Roll
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Paper width: 80mm Roll diameter: 80mm Paper length: 55m ~ 90m (depends on paper thickness) Paper type: Thermal Compatible with POS Printer
Barcode paper (32x19 mm) 5000pcs
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Size: 32×19 mm
Barcode paper (32x19 mm) 10000pcs
Mega Color Self-Adhesive Label (57×50 mm)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။Size: 57×50 mm
Mega Color Self-Adhesive Label (80×80 mm)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။Size: 80×80 mm
Brother TZe-231 Labelling Tape Cassette Black on White (12mm)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Brand: Brother 12mm wide, 8m long High quality genuine Brother cassette Ensure durable, easily readable results Compatible withawide range of Brother’s P-touch printers, this genuine...
Brother TZe-751 Labelling Tape Black on Green (24mm)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Brand: Brother Black text on Green tape 24mm wide, 8m long High quality genuine Brother cassette Ensure durable, easily readable results Compatible withawide range of...
Brother TZe-731 Labelling Tape Black on Green (12mm)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Brand: Brother Black text on Green tape 12mm wide, 8m long High quality genuine Brother cassette Ensure durable, easily readable results Compatible withawide range of...
Brother TZe-721 Labelling Tape Black on Green (9mm)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Brand: Brother Black text on Green tape 9mm wide, 8m long High quality genuine Brother cassette Ensure durable, easily readable results Compatible withawide range of...
Brother TZe-661 Labelling Tape Black on Yellow (36mm)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Brand: Brother Black text on Yellow tape 36mm wide, 8m long High quality genuine Brother cassette Ensure durable, easily readable results Compatible withawide range of...
Brother TZe-641 Labelling Tape Black on Yellow (18mm)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Brand: Brother Black text on Yellow tape 18mm wide, 8m long High quality genuine Brother cassette Ensure durable, easily readable results Compatible withawide range of...
Brother TZe-631 Labelling Tape Black on Yellow (12mm)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Brand: Brother Black text on Yellow tape 12mm wide, 8m long High quality genuine Brother cassette Ensure durable, easily readable results Compatible withawide range of...
Brother TZe-621 Labelling Tape Black on Yellow (9mm)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Brand: Brother Black text on Yellow tape 9mm wide, 8m long High quality genuine Brother cassette Ensure durable, easily readable results Compatible withawide range of...
Brother TZe-611 Labelling Tape Black on Yellow (6mm)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Brand: Brother Black text on Yellow tape 6mm wide, 8m long High quality genuine Brother cassette Ensure durable, easily readable results Compatible withawide range of...
Brother TZe-561 Labelling Tape Black on Blue (36mm)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Brand: Brother Black text on blue tape 24mm wide, 8m long High quality genuine Brother cassette Ensure durable, easily readable results Compatible withawide range of...
Brother TZe-555 Labelling Tape White on Blue (24mm)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Brand: Brother White text on blue tape 24mm wide, 8m long High quality genuine Brother cassette Ensure durable, easily readable results Compatible withawide range of...
Brother TZe-551 Labelling Tape Black on Blue (24mm)
Brother TZe-541 Labelling Tape Black on Blue (18mm)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Brand: Brother White text on blue tape 18mm wide, 8m long High quality genuine Brother cassette Ensure durable, easily readable results Compatible withawide range of...
Brother TZe-535 Labelling Tape White on Blue (12mm)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Brand: Brother White text on blue tape 12mm wide, 8m long High quality genuine Brother cassette Ensure durable, easily readable results Compatible withawide range of...
Brother TZe-531 Labelling Tape Black on Blue (12mm)
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Brand: Brother Black text on blue tape 12mm wide, 8m long High quality genuine Brother cassette Ensure durable, easily readable results Compatible withawide range of...